သုံးခွက် မော့မယ် | Digital Tea House
Notice: Undefined property: stdClass::$field_level in include() (line2of /domains/digitalteahouse.info/DEFAULT/sites/all/themes/digital/template/node/node--view--tea-level--block-2.tpl.php).
Notice: Trying to access array offset on value of type null in include() (line2of /domains/digitalteahouse.info/DEFAULT/sites/all/themes/digital/template/node/node--view--tea-level--block-2.tpl.php).
Notice: Trying to get property 'name' of non-object in include() (line5of /domains/digitalteahouse.info/DEFAULT/sites/all/themes/digital/template/node/node--view--tea-level--block-2.tpl.php).
Firewall ဆိုသည်မှာ လုံခြုံရေးမြင့်မားသော network တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိမိ ကွန်ပျူတာ Network ထဲကိုဝင်လာမဲ့ အတားအဆီး အနှောက်အယှက်မှန်သမျှကို ပိတ်ဆို့ ခုခံ တားဆီးပေးတဲ့အရာလို့လဲ ခေါ်နိုင်ပါသည်။
သန်းနှင့်ချီသောလူများသည် ယင်းတို့၏အချက်အလက် ချိုးဖောက်ခံရခြင်းများ ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပေါ်သည်။
အင်တာနက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များဖြစ်တဲ့ Google တို့၊ Firefox Mozila တို့တွင် ပုံမှန်ရှာနိုင်တဲ့အရာတွေရှိပါသည်။ ဉပမာ - ဘယ်ဖုန်းက ပိုကောင်းလဲ၊ ဖုန်းက ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်လို့မရတော့ဘူး၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ၊
Facebook - Cambridge Analytica ကိစ္စဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာအတော်လေး ပျံ့နှံ့ပြီး လူပြောများခဲ့ရတဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။
Tor Browser ဆိုသည်မှာ အခမဲ့ လုံခြုံရေး Browser တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Onion Browser ဟုလည်းခေါ်ကြပါသည်။ အလွှာအထပ်ထပ်ဖြင့် သုံးစွဲသူများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးထားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Psiphon သည် Psiphon Inc.မှ ထုတ်လုပ်ထားသော VPN၊ SSH နှင့် HTTP ကြားခံ နည်းပညာများအား အသုံးပြုကာဆင်ဆာဖြတ်တောက်ထားသော အင်တာနက်ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအသုံးပြုနိုင်စေရန် ကျော်လွှားပေးနိုင်သည့် Application တစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် ငါးမျှားချိတ်များအား ရှောင်ရှားခြင်း ( Phishing )
Phishing ဆိုသည်မှာ ယုံကြည်ရသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ယုံကြည်လောက်ဖွယ်အကြောင်းအရာ များပါသောလင့်ခ်များပို့၍ ထိုလင့်ခ်များကို၀င်လိုက်လျှင်မိမိ၏ ser name, password ,Bank acc ,card number စသောအချက်အလက်များကိုတောင်းတာကိုတွေ့ရသည်။